Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica: Badbaadada iyo Caafimaadka Spa ee buug-gacmeedka cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Hawl-wadeennada waax-hoosaadka isboortiga ee warshadaha dalxiiska ee Jamaica ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan ​​buug-hawleed la soo saaray si uu ugu hago badbaadada, hufnaanta iyo xirfad-yaqaannada waxa ay qabtaan marka ay gelayaan US$4.4 trillion warshadaha caafimaadka iyo fayoqabka caalamka.
Buugga Badbaadada COVID-19 ee Waaxda Isboortiga Jamaica, oo ay soo saartay Shabakadda Xiriirinta Dalxiiska (TLN), qayb ka mid ah Sanduuqa Kobcinta Dalxiiska (TEF), ayaa bixisa tilmaamo iyo talooyin dhammaystiran oo loogu talagalay hawl wadeennada isboortiga ee u adeegaya waaxda dalxiiska si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha iyo martida iyadoo la yareynayo faafitaanka COVID-19 inta lagu jiro adeegyada daawaynta spa.
Buuga buuggu waxa uu raacayaa hab-raacyada iyo xeerarka u degsan Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo-qabka, Hab-maamuuska Badbaadada iyo Caafimaadka ee Wasaaradda Dalxiiska ee COVID-19, iyo sidoo kale kuwa Ururka Isboortiga Caalamiga ah, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Ururka Heerarka Caalamiga ah.
Isagoo ka hadlaya daahfurka casriga ah ee buug-gacmeedka iyo Aqoon-is-weydaarsiga Horumarinta Maqaarka Dabiiciga ah ee TLN dhawaan, Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett wuxuu sheegay in caafimaadka iyo fayoobaanta ay yihiin qodobbada ugu muhiimsan ee horseedaya safarka iyo waaxda martigelinta iyadoo dadku ay u fiirsadeen inay ka soo kabtaan ku dhawaad ​​​​laba sano oo firfircooni ah oo uu keenay masiibada COVID-19.
Wuxuu sheegay in adduunka oo dhan uu ka jiro dadaal xooggan oo looga faa'iideysanayo suuqa fayoobaanta iyo Jamaica Waxay ahayd meel si wanaagsan loo meeleeyay si loo helo qayb ka mid ah keega dhaqaalaha laakiin "waa inaan diyaargarownaa oo aan diyaar u nahay inaan buuxinno shuruudaha uu qofka safarka ah ee COVID-ka dambe saaraya mid kasta oo naga mid ah."
Qaar badan oo ka mid ah waddamada tartamaya ma haystaan ​​kala badh hantida ay Jamaica ku barakaysnaato, ayuu yidhi Wasiir Bartlett, si kastaba ha ahaatee, "COVID-19 waxa ay soo saartay su'aalo badan oo muhiim ah; mid soo noqnoqota, booqdayaashu ma dareemi karaan ammaan imaatinka meesha aan u soconno oo ay ka faa'iidaysan karaan dhammaan alaabooyinka aan iibinayno?"
Waxa uu sheegay in hubinta goobta ay hadda tahay shardi iyo fure u ah guusha dalxiiska mustaqbalka, Jamaica waa in ay ka go'an tahay ballanqaadka ay u samaynayso booqdayaasha, "iyaga oo u xaqiijinaya khibrad dhab ah, badbaado leh oo aan toos ahayn, taas oo ixtiraam u ah bulshada iyo deegaanka."
Wasiir Bartlett ayaa hoosta ka xarriiqay hawl-wadeennada isboortiga muhiimadda ay leedahay in la wanaajiyo bixinta meelaha muhiimka ah ee dammaanadda loo socdo iyada oo "hufnaanta, wax ku oolnimada, iyo adeegga heerka sare ah lagu saleynayo dhammaan dhinacyada khibradda booqdaha." Tani waxay ku baaqday in la helo tas-hiilaadyo heer-koowaad ah, shaqaale si xirfad leh u tababaran iyo alaabooyinka waddaniga ah ee soo jiidashada leh ee buuxiya heerarka suuqyada caalamiga ah, ayuu yidhi.
Wasiir Bartlett waxa uu sheegay in ay aad muhiim u tahay in Shabakadda Caafimaadka iyo Fayoqabka ee TLN ay aqoonsatay wax soo saarka fayoobida, gaar ahaan kuwa laga soo saari karo gudaha dalka lagana faa’iidaysan karo spas, taas oo laf dhabar u ah istaraatiijiyadeeda lagu horumarinayo caafimaadka iyo fayoqabka dalxiiska ee Jamaica.
“Siyaasadda Wasaaradda Dalxiiska ahaan, waxa naga go’an horumarinta Dalxiiska oo soo saara mid dhab ah. waayo-aragnimada Jamaican oo leh kala duwanaanshaheeda caadooyinka dhaqameed. Tani waxay ka tarjumaysaa in ay diyaar u yihiin soo-booqdayaashayada, alaabooyinka wadaniga ah ee ay abuureen oo ay soo saareen dadkeena kartida badan, "ayuu raaciyay.
Ka soo qayb galayaasha aqoon iswaydaarsigan oo isugu jiray kuwo online iyo jidh ahaanba ka dhacay xarunta shirarka ee Montego Bay ayaa waxa ay sidoo kale ka dhegaysteen gudoomiyaha shabakada caafimaadka iyo fayoqabka ee TLN Kyle Mais oo tilmaamay qiimaha ay aduunka ku leedahay warshadaha spa iyo agabka badan ee ay noqon karaan laga soo saaro gudaha alaabta ceeriin ee Jamaica.
Waxa kale oo ay ka maqleen Dr. Aisha Jones, oo kala shaqaynaysay TLN lataliye ahaan horumarinta buug-gacmeedka. Waxay xustay in bilowgii 72 boqolkiiba dadka safarka ah ay aad uga walaacsan yihiin booqashada spa, 80 boqolkiiba waxay hadda diyaar u yihiin inay wax badan ku qaataan daaweynta isboortiga.
Waxa kale oo la qeexay in dukumeentigu diyaar yahay, maadaama dadka danaynaya ay heli karaan buug-gacmeedka oo qaab dijital ah halkan ama kala xidhiidh TLN ciwaanka iimaylka soo socda si aad nuqul uga soo qaadato: [emailka waa la ilaaliyay] .